Si fudud oo - Lacag lagu diri karo ehelkaaga | Invite a friend SEK | Transfer Galaxy
Casuum saaxiibadaa oo hel 250 kr midkiiba
Qiimadhimis ku hel ku casuumida saaxiibadaa in ay Transfer Galaxy isticmaalaan.
Waa ay fududahay casuumidu. Waxa kaliya ee aad u baahantahay waa cinwaanka email-ka ama lambarka saaxiibkaa. Marka qofka aad casuumtay uu diro wax ka badan 500 kr ama in u dhiganta, waxaan kuu soo diri doonnaa 250 kr ama in u dhiganta oo qiimadhimis ah. Waxaad casuumi kartaa inta qof ee aad doontid waxaadna ku helaysaa ilaa 10 qiimadhimis.
Casuumaadaha iyo qiimadhimista
Si aad qiimadhimis u heshid, waa in aad casuumtaa macmiil cusub kadibna waa in macmiilku uu dirsadaa in ka badan 500 kr (ama u dhiganta oo ah lacagta ay dirsanayaan).
Casuum inta qof ee aad doonto kuna hel ilaa 10 qiimadhimis. Qof walba ee aad casuumtidna wuxuu helayaa qiimadhimis.
Wixii faahfaahin ah oo ku saabsan casuumida saaxibdaada, eeg sida casuumaada u shaqeyso.
Wixii faahfaahin ah oo ku saabsan isticmaalida qiimadhimistaada, eeg sida qiimadhimistu u shaqeyso.
Wixii faahfaahin ah oo ku saabsan cadadka qiimadhimista, eeg cadadka ay ku noqoneyso lacagaha kala duwan ee aan dirno.
Dirso lacag si’amaan ah
In ka badan 6 bilyan ee SEK ayaa loo diray saaxiibbada iyo qoysaska adduunka oo dhan. Tani waa in ka badan sadex milyan falal ah daryeelid.
"Waxaan qarashka caafimaadka ka taageeraa ayeeyaday oo ku nool Taylaan. Mar walba ay lacag u baahato, waxaa iga caawiya in aan dhaqsi ku gaarsiiyo Transfer Galaxy."
Rose, waxay lacag u dirtaa Taylaan
"Aad ayay u fududahay in aad lacag ku dirsatid Transfer Galaxy. Waxaan lacag ku diri karaa xarumaha kaashka laga bixiyo, ama si toos ah akoon bangi, anigoo ka diraya app-ka ama kumbiyuutarka, si dhaqsi iyo ammaan ah"
Özkan, wuxuu lacag u diraa Turkiga.
"Walaalkay wuxuu ku noolyahay Ciraaq. Riyadiisu waa in uu yeesho ganacsi u gaar ah, anigana waxaan u diraa lacag aan kaga caawiyo in riyadiisu uu ka dhabeeyo!"
Humam, wuxuu lacag u diraa Ciraaq.